Sihlonipha ubumfihlo bakho
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Chemical Equation Balancer
KwaChemical Equation Balancer, efinyeleleka ku-chemicalequationbalance.com, enye yezinto eziza kuqala kithi yimfihlo yezivakashi zethu. Lo mbhalo weNqubomgomo Yemfihlo uqukethe izinhlobo zolwazi oluqoqwayo futhi luqoshwe yiChemical Equation Balancer nokuthi silusebenzisa kanjani.
Uma unemibuzo eyengeziwe noma udinga eminye imininingwane mayelana nenqubomgomo yethu Yobumfihlo, unganqikazi ukuxhumana nathi.
IChemical Equation Balancer ilandela inqubo ejwayelekile yokusebenzisa amafayela we-log. Lawa mafayela afaka izivakashi lapho evakashela amawebhusayithi. Zonke izinkampani zokubamba zenza lokhu futhi ziyingxenye yezibalo zezinsizakalo zokubamba. Imininingwane eqoqwe ngamafayela e-log ifaka amakheli e-internet protocol (IP), uhlobo lwesiphequluli, i-Internet Service Provider (ISP), isitembu sosuku nesikhathi, amakhasi akhomba / aphumayo, futhi mhlawumbe nenombolo yokuchofozwa. Lokhu akuxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi olukhomba mathupha. Inhloso yolwazi ukuhlaziya izitayela, ukuphatha isayithi, ukulandelela ukunyakaza kwabasebenzisi kuwebhusayithi, nokuqoqa imininingwane yabantu.
I-Google DoubleClick i-DART Cookie
I-Google ingomunye umthengisi wesithathu esayithini lethu. Ibuye isebenzise amakhukhi, eyaziwa ngokuthi amakhukhi e-DART, ukuhambisa izikhangisi kuzivakashi zethu zesayithi ngokusekelwe ekuvakasheni kwabo ku-www.website.com nakwamanye amasayithi e-intanethi. Noma kunjalo, izivakashi zingakhetha ukwenqaba ukusebenzisa amakhukhi we-DART ngokuvakashela isikhangiso se-Google nesevisi yenethiwekhi yemfihlo ku-URL elandelayo - https://policies.google.com/technologies/ads
Ungaxhumana nalolu hlu ukuthola Inqubomgomo Yemfihlo kumlingani ngamunye wokukhangisa weChemical Equation Balancer. Inqubomgomo yethu Yobumfihlo yadalwa ngosizo lwe- Ijenali Yemfihlo Yobumfihlo yamahhala futhi Inqubomgomo Yobumfihlo Ye-inthanethi.
Qaphela ukuthi i-Chemical Equation Balancer ayinakho ukufinyelela noma ukulawula lawa makhukhi asetshenziswa ngabakhangisi abavela eceleni.
Inqubomgomo Yobumfihlo ye-Chemical Equation Balancer ayisebenzi kwabanye abakhangisi noma kumawebhusayithi. Ngakho-ke, sikweluleka ukuthi ubheke Izinqubomgomo Zobumfihlo eziqondene nalezi zinhlelo zezikhangiso ezivela eceleni ukuze uthole imininingwane ethe xaxa. Kungabandakanya ukwenza kwabo kanye nemiyalo yokuthi ungakhetha kanjani ukuphuma ezinkethweni ezithile. Ungathola uhlu oluphelele lwalezi Nqubomgomo Zobumfihlo nezixhumanisi zazo lapha: Izixhumanisi Zenqubomgomo Yobumfihlo.
Ungakhetha ukukhubaza amakhukhi ngezinketho zakho zesiphequluli. Ukwazi imininingwane eminingi mayelana nokuphathwa kwamakhukhi ngeziphequluli ezithile zewebhu, kungatholakala kumawebhusayithi eziphequlululi. Ayini Amakhukhi?
Esinye isici sokuqala kwethu sinezela ukuvikelwa kwezingane ngenkathi usebenzisa i-intanethi. Sikhuthaza abazali nabaqaphi ukuba babone, bahlanganyele, futhi / noma baqaphe futhi baqondise umsebenzi wabo we-intanethi.
IChemical Equation Balancer ayiqoqi ngamabomu noma yiluphi Ulwazi Lomuntu Olukhonjwa ezinganeni ezingaphansi kweminyaka engu-13. Uma ucabanga ukuthi ingane yakho inikeze lolu hlobo lolwazi kuwebhusayithi yethu, sikukhuthaza kakhulu ukuthi uxhumane nathi ngokushesha futhi sizokwenza konke okusemandleni ethu uku susa ngokushesha imininingwane enjalo kumarekhodi ethu.
Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kuphela emisebenzini yethu eku-inthanethi futhi isebenza kubavakashi bewebhusayithi yethu maqondana nemininingwane abayabe kanye / noma abayiqoqayo kwi-Chemical Equation Balancer. Le nqubomgomo ayisebenzi kunoma yiluphi ulwazi oluqoqwe ngokungaxhunyiwe ku-inthanethi noma ngeziteshi ezingeyona le webhusayithi.
Ngokusebenzisa i-website yethu, ngalokhu uyavuma Inqubomgomo Yobumfihlo futhi uvumelana nemigomo nemibandela yayo.